Sampana fikarohana heloka bevava : « Tsy maintsy ampiantsoina ireo olona ahina nandika lalàna » – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:49
Accueil/Songadim-baovao/Sampana fikarohana heloka bevava : « Tsy maintsy ampiantsoina ireo olona ahina nandika lalàna »
Sampana fikarohana heloka bevava : « Tsy maintsy ampiantsoina ireo olona ahina nandika lalàna »
Tonga niakatra teny amin’ny Sampana fikarohana heloka bevava eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena etsy Fiadanana omaly, ny mpanao gazety anankiroa avy amin’ny Tambatra, omaly tamin’ny 10 ora maraina. Tsy nisy nipika ny fanadihadiana natao azy ireo omaly, izay naharitra ora maro. Nanambara ny avy amin’ny Kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena Antananarivo, ny Jly Andry Rakotondrazaka fa tsy anavahana ny fampiantsoana rehefa misy ny karazana fandikan-dalàna. Fanadihadiana…
Rado Harivelo 17 février 2021
Tonga nalaina am-bavany tety ny mpanao gazety roa avy amin’ny Tambatra.
Nigadona teny amin’ny Sampana fikarohana heloka bevava eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena etsy Fiadanana, omaly maraina, tamin’ny 10 ora, ny mpanao gazety roa lahy avy amin’ny Fandaharana Tambatra. Isan’ireny ny mpanao gazety, Jean Claude Andriamalala sy ny mpanao gazety Soava Andriamarotafika. Antony niantsoana azy ireo, raha ny fanadihadiana, dia noho ny famoahana vaovao momba ilay resaka mersenera sy ny resaka fidirana fitaovam-piadiana tany Nosy Be, izay noresahin’izy ireo, tamin’ny 8 febroary lasa teo, tao anatin’ny fandaharana. Nandritra ny fahatongavanay teny an-toerana, tamin’ny 10 ora maraina io, no nanomboka ny fanadihadiana sy fakàna am-bavany ireto mpanao gazety avy amin’ny Fandaharana Tambatra ireto. Mazava, araka izany, amin’ny maha fanadihadiana sy fakàna am-bavany azy izay, dia mbola tsy nisy nipika ny vokatry ny fanadihadiana, izay naharitra ora maro. Hatramin’ny fotoana nanoratanay omaly hariva, raha niantso ny tomponandraikitra teo anivon’ny Sampana fikarohana heloka bevava eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena, etsy Fiadanana izahay, dia mbola nitohy ny fakàna am-bavany ireo mpanao gazety roa lahy.
Tsy anavahana ny fanaovana famotorana…
Hentitra amin’ny fampiharan-dalàna ny Kaomandin’ny CIRGN Antananarivo.
Nanambara ny Jly Andry Rakotondrazaka, Kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena eto Antananarivo fa « tanterahina ny fakàna am-bavany ireo mpanao gazety anankiroa, avy amin’ny Fandaharana Tambatra, mahakasika ny famoaham-baovao tamin’ny radio sy tany anaty tambajotra ara-tsosialy facebook, tamin’ny alatsinainy 8 febroary 2021 lasa teo, momba ny trangan-javatra niseho tany Nosy Be. Ankehitriny dia atao ny famotorana momba io famoaham-baovao io satria ny zavatra tahaka ireny, dia manohintohina ny filaminam-bahoaka, izay asan’ny mpitandro filaminana tanteraka, miandraikitra ny fanaovana ny famotorana tahaka izany ». Nasongadiny nandritra ny tafa fohy tamin’ny mpanao gazety fa tsy maintsy ho henon’ny rehetra eo ny tohin’ny fanadihadiana sy fakàna am-bavany ireo mpanao gazety roa avy amin’ny Fandaharana Tambatra ireo. Notsindriany fa ny eo anivon’ny Fitandroana ny filaminana raha vao maheno vaovao na trangam-baovao amin’ny fomba rehetra mety hahazoany azy, ka misy tokony hanaovana famotorana dia tsy maintsy manao izany, na iza izy na iza. Tsy anavahana io, na radio, na fahitalavitra na loharanom-baovao hafa ahitana izay vaovao mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka izay. Ny mpitandro filaminana avy amin’ny Emmo/Reg Analamanga dia tsy maintsy mandray andraikitra amin’ny zava-mitranga, indrindra mahakasika ny fandikan-dalàna.
Firenena mitady fitoniana…
Isan’ireo voaantso teny amin’ny Borigadin’ny Zandarimaria, Sampana heloka bevava koa ny filoha ny Holafitry ny mpanao gazety, Gerard Rakotonirina, satria mpanao gazety no iharan’ny fanadihadiana sy fakàna am-bavany, araka ny lalàna manan-kery. Mazava ho azy fa ny Holafitra dia natao hiaro ny tombontsoan’ny mpanao gazety, amin’ny fanatanterahana ny asany. Raha ny marina, tsy anavahana ny fanatanterahana izany, rehefa misy ny mpanao gazety anaovana famotorana. Ny eo anivon’ny Holafitra dia miantso hatrany ny rehetra hanaja hatrany ny etika sy ny deontolojia amin’ny fanatanterahana ny asa amin’ny maha mpanao gazety. Nilaza ny avy amin’ny Holafitry ny mpanao gazety fa firenena mitady fitoniana isika. Ny mpanao gazety rehetra dia baikon’ny zotran-dahatsoratra, izay mifehy azy tsirairay. Na izany aza, mitaky vaovao marina sy voamarina hatrany ny olom-pirenena mpanjifa.
TAHIRIM-BOLAMENA AO AMIN’NY BANKY FOIBE: Volamena 177Kg voaangona tao anatin’ny iray volana
FILOHA ANDRY RAJOELINA: « Tsy mieritreritra ny hanitatra ny fe-potoam-piasako aho”
BAOMBA ARTIZANALY, MIARA-MANONJA, HETSIKY NY MPIANATRA,…: Mivandravandra ireo teti-dratsin’ny mpanohitra